Alexander Boris de Pfeffel Johnson (waxa uu dhashay 19 Juun 1964) waa siyaasi British ah, qoraa, horena u soo noqday suxufiyad u soo noqday raiisal wasaaraha boqortooyada ingiriiska iyo hogaamiyaha xisbiga muxaafidka tan iyo sanadkii 2019. Wuxuu ahaa wasiirka arimaha dibada intii u dhaxeysay 2016 ilaa 2018 iyo duqa magaalada London 2008 ilaa 2016. Johnson wuxuu xubin ka ahaa baarlamaanka (MP) ee Henley sanadihii 2001 ilaa 2008 wuxuuna ahaa xildhibaanka Uxbridge iyo South Ruislip ilaa 2015. Fikir ahaan, wuxuu u aqoonsaday inuu yahay hal wadan oo muxaafid ah.
Johnson wuxuu wax ku bartay Eton College wuxuuna wax ku bartay Classics ee Balliol College, Oxford. Waxaa loo doortay Madaxweynaha Ururka Oxford Union 1986. 1989, wuxuu noqday weriyaha Brussels ka dibna qoraa siyaasadeed oo ka tirsan wargayska Daily Telegraph, halkaas oo qoraaladiisu ay saameyn xoog leh oo Eurosceptic ah ku yeesheen midigta Ingiriiska. Wuxuu ahaa tifaftiraha joornaalka 'Spectator magazine' sanadihii 1999 ilaa 2005. Kadib markii loo doortay xildhibaanka xisbiga Henley sanadkii 2001, Johnson wuxuu noqday wasiirkii yaraa ee Shadow ee ka hooseeyey hogaamiyayaashii muxaafidka Michael Howard iyo David Cameron. Sannadkii 2008, waxaa loo doortay Duqa magaalada London oo wuxuu iska casilay Aqalka Hoose; mar labaad ayaa loo doortay Duqa magaalada 2012. Intii uu ahaa duqa magaalada, Johnson wuxuu kormeeray ciyaarihii Olombikada ee xagaaga, wuxuu soo saaray basaska cusub ee Routemaster, nidaamka kireysiga meertada iyo baabuurka fiilada ee Thames, wuxuuna mamnuucay isticmaalka aalkolada inta badan gaadiidka dadweynaha ee London.
Sannadkii 2015, Johnson waxaa loo doortay xildhibaan Uxbridge iyo South Ruislip; wuxuu iska casilay xilka duqa magaalada sanadka soo socda, mudadaas oo uu noqday shaqsi caan ka ah ololihii guusha ee Codbixinta ee Brexit ee aftidii xubinimada Midowga Yurub ee 2016. Kadib wuxuu qabtay xilka Xoghayaha Arimaha Dibada intii lagu gudajiray marxaladihii hore ee ra'iisul wasaaraha Theresa May; wuxuu iska casilay jagada labo sano kadib, isagoo dhaleeceeyay qaabka May ee Brexit iyo Heshiiska Checkers. Kadib markii uu iscasilay May 2019, waxaa loo doortay hogaamiyaha muxaafidka waxaana loo magacaabay raiisul wasaare. Soo bixitaankiisii ​​Sebtember 2019 ee Baarlamaanka waxaa xukumay sharci darro Maxkamadda Sare. Doorashadii guud ee 2019, Johnson wuxuu ku hogaamiyay xisbiga muxaafidka guushiisii ​​ugu weyneyd ee baarlamaan tan iyo 1987, wuxuu ku guuleystay 43.6% codadka - waana saamiga ugu badan ee xisbi kasta yeesho tan iyo 1979. Boqortooyada Midowday ee UK waxay ka baxday Midowga Yurub iyadoo la raacayo shuruudaha Brexit ee dib loo eegay. ka noqoshada heshiiska, galaya marxalad kala guur ah. Laga soo bilaabo Febraayo 2020, Johnson wuxuu hogaaminayey jawaabta joogtada ah ee Boqortooyada Midowday ee ku aaddan CUDURKA-19 faafa.
Taageerayaasha Johnson waxay ku amaaneen inuu yahay mid rajo leh, kaftan badan oo madadaalo leh, iyadoo racfaanku ka sii dheereynayo codbixiyaasha dhaqanka ee muxaafidka ah. Taa bedelkeeda, dhaleeceeyayaashiisa waxay ku eedeeyeen madaxnimo, ceebayn, iyo eex.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Boris_Johnson&oldid=206407"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 Oktoobar 2020, marka ee eheed 13:12.